Xa ubelwe isicatshulwa eklasini, kunzima ukuba ucace ngokucacileyo ukuba unaloo nto yokuqala. Ngokuqinisekileyo, kukho iindlela ezininzi zokubhala ngcono kwisikolo esiphakamileyo , kodwa ukuba awukwazi ukuqonda umxholo wesiseko, awuyi kuphucula. Ifom yefayili yesicatshulwa, nangona isisiseko (ngokuqinisekileyo akuyiyo into oyisebenzisayo kuVavanyo loPhuculo lwe-ACT oluQinisekisiweyo , umzekelo), yindlela efanelekileyo yokuqalisa ukuba ungenayo ininzi yokubhala i-essay.
Isiqendu 1: Isingeniso
Lo mhlathi wokuqala, owenziwe malunga nezivakalisi ezi-5, unenjongo ezimbini:
Thabatha ingqalelo yomfundi
Nika ingongoma ephambili (ithesis) yesincoko yonke
Ukufumana ingqalelo yomfundi, izivakalisi zakho ezimbalwa zokuqala zibalulekileyo. Sebenzisa amagama achazayo , i- anecdote , umbuzo ophazamisayo okanye inqaku elithakazelisayo elihambelana nesihloko sakho ukuze udwebe umfundi. Zenza ubuchule bakho kunye nokubhala okubhaliweyo ukufumana iingcamango iindlela zokuthabatha ukuqala isicatshulwa.
Ukuze uchaze iphuzu eliphambili, isivakalisi sakho sokugqibela kwisiqendu sokuqala siyintloko. Isivakalisi sokugqibela sesingeniso sichazela umfundi oko ucinga ngako ngesihloko esinikwe kwaye ubhale iingongoma oza kubhala ngazo kwisincoko.
Nasi umzekelo wesigcaziso esilungileyo esinikwe ngesihloko esithi, "Ngaba ucinga ukuba intsha kufuneka ibe nemisebenzi esikolweni esiphakeme?"
Ndibe nomsebenzi ukususela ekubeni ndilishumi elinambini. Njengomntwana oselula, ndahlambulula izindlu zamalungu entsapho, ndenza ibhanana idibanisa kwi-ice cream, kwaye ndalinda iitafile kwiindawo zokutyela ezahlukeneyo. Ndenze konke ngelixa ndithwele iqondo elihle lokubala kwibakala esikolweni, kwakhona. Intsha kufuneka ibe nemisebenzi esikolweni esiphakeme kuba imisebenzi iyabafundisa ukuqeqeshwa , ibenze imali kwiziko, kwaye igcine iphuma kwingxaki.
Ukuqwalasela i-Grabber: "Ndibe nomsebenzi ukususela ekubeni ndilishumi elinambini." Uhlobo lwesitatimende esinesibindi, kunene?
I-Thesis: "Abaselula kufuneka babe nemisebenzi esikolweni esiphakeme kuba imisebenzi iyabafundisa ukuqeqeshwa, bayifumane imali esikolweni, bahlale bexakekile." Ubonisa imbono yombhali, kwaye unikezela ngamaphuzu aza kwenziwa kwisincoko.
Imihlathi 2-4: Ukucacisa Amaphuzu Akho
Emva kokuba uthethe i -sissis yakho, kufuneka uchaze ngokwakho. Umsebenzi wemihlathi emithathu elandelayo-imihlathi yomzimba-ukuchaza iingongoma ze-thesis yakho usebenzisa izibalo , inyaniso, imizekelo, i-anecdotes kunye nemizekelo ebomini bakho, uncwadi, iindaba okanye ezinye iindawo.
I -sissis kumzekelo wesingeniso "Intsha kufuneka ibe nemisebenzi esikolweni esiphakeme ngenxa yokuba imisebenzi iyabafundisa ukuqeqeshwa, ibenze imali kwiziko, kwaye igcine iphuma kwingxaki."
Isigatshana sesi-2: Sichaza iphuzu lokuqala kwisicatshulwa sakho: " Abaselula kufuneka babe nemisebenzi ngelixa esikolweni esiphakeme kuba imisebenzi ibafundisa ukuqeqeshwa."
Isigatshana sesi-3: Sichaza ingongoma yesibini kwisicatshulwa sakho: "Abaselula kufuneka babe nemisebenzi esikolweni esiphakeme kuba imisebenzi iyenzela imali esikolweni."
Isigatshana sesi- 4: Sichaza iphuzu lesithathu kwisicatshulwa sakho: " Intsha kufuneka ibe nemisebenzi esikolweni esiphakeme kuba imisebenzi iyabagcina ingxaki."
Kwimihlathi emithathu nganye, isivakalisi sakho sokuqala, esibizwa ngesivakalisi sesihloko , siya kuba yinto oyichazayo kwi-thesis yakho. Emva kwesivakalisi sesihloko, uya kubhala izivakalisi ezingaphezulu kwe-3-4 ezichaza isizathu sokuba le nyaniso iyinyaniso. Isivakalisi sokugqibela kufuneka uguqule kwisihloko esilandelayo.
Nasi umzekelo wendlela umhlathi 2 onokubonakala ngathi:
Intsha kufuneka ibe nemisebenzi esikolweni esiphakeme kuba imisebenzi ifundisa ukuqeqeshwa. Ndiyazi ukuba uqobo. Xa ndisebenza kwivenkile ye-ayisikrimu, kwafuneka ndibonise yonke imihla ngexesha okanye ndiza kukhishwa. Oko kwandifundisa indlela yokugcina ishedyuli , inyathelo lokuqala lokugcina uqeqesho. Njengomgcini wendlu ohlambulula phantsi kunye nokuhlamba iifestile zamakhaya omndeni wam, ndafunda enye into yokuqeqesha, oko kukunyaniseka. Ndayazi ukuba oomakhulukazi babeza kujonga kum, ngoko ndafunda ukunamathela kumsebenzi kude kube kuphele ngokupheleleyo. Oko kudinga itekisi yokuqeqeshwa kumfana oselula, ngakumbi xa efuna ukufunda incwadi. Kwimizi mibini, kwafuneka ndilawulwe ixesha lam kwaye ndihlale emsebenzini kuze kuphele. Ndafunda olu hlobo loqeqesho ngokubambelela emsebenzini, kodwa ukuzithiba ngokuzimeleyo akusiyo kuphela isifundo endifundayo.
Isiqendu 5: Isiphetho
Emva kokuba ubhale isingeniso kwaye uchaze iingongoma zakho eziphambili emzimbeni wesincoko, ukutshintsha kakuhle phakathi komhlathi ngamnye, isinyathelo sakho sokugqibela kukugqiba isicatshulwa. Isiphetho, esenziwe ngezivakalisi ezi-3-5, sinenjongo ezimbini:
Phinda ufunde oko ushilo kwisicatshulwa
Shiya ingqalelo engapheliyo kumfundi
Ukuphindaphinda, izivakalisi zakho ezimbalwa zokuqala ziyintloko. Phindaphinda iingongoma ezintathu ezibalulekileyo zesicatshulwa sakho ngamagama ahlukeneyo, ngoko uyazi ukuba umfundi uqondayo apho umi khona.
Ukushiya ingcamango engapheliyo, izivakalisi zakho zokugqibela ziphambili. Mshiye umfundi ngokuthile ocingayo malunga nokuphelisa umhlathi. Ungazama ukucaphula, umbuzo, i-anecdote, okanye nje isigwebo esichazayo. Nasi umzekelo wesiphelo:
Andikwazi ukuthetha nabani na umntu, kodwa amava am ndifundise ukuba ukuba nomsebenzi ngexesha loba ngumfundi yinto efanelekileyo kakhulu. Akufundisi nje abantu ukugcina ukuzithiba ebomini babo, kunokubanika izixhobo abazifunayo ukuze baphumelele njengemali yokufundiswa kwikholeji okanye incwadi encomekayo evela kumphathi. Ngokuqinisekileyo, kunzima ukuba ngumntwana osemtsha ngaphandle kwengcinezelo eyongeziweyo yomsebenzi, kodwa kunye nazo zonke iinzuzo zokuba nomnye, kubaluleke kakhulu ukuba ungenzi umnikelo.
Ziqhelise ukuphunyezwa kwezi nyathelo kwisicatshulwa-ebhaliweyo kunye neeprogram zokubhala ezinomtsalane njengemifanekiso yokubhala imifanekiso . Xa usebenzise ngokwengeziwe le ndlela elula yokubhala iincwadana, kulula ukuba inkqubo yokubhala ibe yinto.
I-Claflin University Admissions
Indlela yokuxelela ukuba iLizwi lesiJamani liMasculine ,kazikazi, okanye i-Nueter
Iinzuzo zoFundo lokuBambisana
Ukukhonkxa kwintambo 101
IHockey yabasetyhini: i-Primer
I-Acupressure Treasures: Hui Yin-Ren 1
IVirginia neWashington DC iKayaking, iCanoeing neRafting
Oko Okufanele Ukwazi NgoMithetho YesiGaba se-Oklahoma Salvage